The Day I Died: Unclosed Case (2020) | MM Movie Store
ဘဝမှာတဈယောကျတညျးအထီးကနျြနတောမြိုး၊ကိုယျ့အမှားမဟုတျဘဲ တဈခွားသူအမှားကွောငျ့အပဈပယျခံရတာမြိုးကို ကွုံနရေတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျအကွောငျးကိုစုံထောကျတဈယောကျက စုံစမျးတာနဲ့ ဇာတျလမျးလေးကို စဖှငျ့ထားပါတယျ
ဒီကားထဲမှာပါဝငျတဲ့သူတှကေတော့နာမညျကွီးမငျးသမီး Kim Hye-soo၊ တကျသဈစ မငျးသမီးလေး No Jeong-ee (18 Again) နဲ့မငျးသားခြော Lee Sang-Yeob တို့က ပါဝငျထားပွီး ၂၀၂၀မှာထှကျရှိထားပွီးIMDB 10/7.3 ထိ ရထားတဲ့ Drama/Crime ဇာတျကားကောငျးလေးတဈကားလညျး ဖွဈပါတယျ
ဇာတျလမျးကို ပွနျပွောရရငျ မတျောတဆမှုတဈခုကွောငျ့ အလုပျနားထားရတဲ့ ဂငျယောငျးဆှနျး အမှုစဈကိုအထကျလူကွီးဖွဈသူကချေါပွီး အလုပျခှငျနားထားရတဲ့မတျောတဆပွဈမှုနဲ့ ရာထူးတိုးခငျြတယျဆိုရငျအမှုတဈခုကိုလိုကျပွီး အမှုပိတျဖို့အတှကျအစီရငျခံစာတငျဖို့တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ
ဂငျယောငျးဆှနျးကိုယျတိုငျကလညျး ယောကျြားနဲ့ကှာရှငျးဖို့အမှုရငျဆိုငျနရေပွီးမတျောတဆမှုကွောငျ့ လကျအကွောဆိုငျးတဲ့ဝဒေနာကိုခံစားနရေတဲ့အပွငျအလုပျကလညျးမတျောတဆမှုအတှကျနဲ့ ပွုတျမလိုဖွဈနခေဲ့သူပါ
အဲ့ဒီအခြိနျအထကျကစုံစမျးခိုငျးတဲ့ ဆယျဂငျြးဆိုတဲ့ သူဌေးသမီးကောငျမလေးတဈယောကျသကွေောငျးကွံစညျမှုကို အစီရငျခံစာဖို့လုပျရငျး မထငျမှတျထားတှပေါ ဆကျလကျသိရှိလာခဲ့ပါတယျကောငျမလေးအဖဖွေဈသူကလညျး မတရားမှုမြားစှာလုပျခဲ့ပွီးနောကျ သဆေုံးသှားခဲ့ပွီးအဈကိုဖွဈသူကလညျး ဆေးမှုနဲ့ထောငျကနြပေါတယျ
ဆယျဂငျြးကိုလညျး သူ့အဖပွေဈမှုတှအေတှကျ သူမသကွေောငျးမကွံခငျမှာ ရဲတှဖေကျကစဈဆေးခဲ့ကွပွီးအဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက ဂငျဆှနျးယောငျးကမတျောတဆမှုကွောငျ့ဆေးရုံရောကျနခြေိနျလညျးဖွဈပါတယျ
ဂငျယောငျးဆှနျး ဆေးရုံက ဆငျးလာပွီးနောကျ အထကျက ယာယီအလုပျဆငျးခိုငျးခဲ့ခြိနျ ဆယျဂငျြးက သဆေုံးသှားခဲ့ပွီးအားလုံးက အပွီးသတျခငျြနတေဲ့အမှုက ယောငျးဆှနျးလကျထဲကိုရောကျလာခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျဘာလို့ရဲတှဖေကျကဒီအမှုကိုသခြောမစုံစမျးပဲ မွနျမွနျပိတျခငျြနခေဲ့တာလဲ?????
ကောငျမလေးကကောဘာလို့သကွေောငျးကွံခငျြခဲ့တာလဲ ဆိုတာရယျသူမသကွေောငျးကွံသှားခွငျးရဲ့ နောကျကှယျမှာ လြှို့ဝှကျခကျြတှအေမြားကွီးရှိနခေဲ့ပါတယျကိုရီးယားကားတှထေုံးစံအတိုငျး အဆုံးသတျမှာ အလှညျ့အပွောငျးလေးတဈခုလညျးထညျ့ထားလို့ကွညျ့ရတာစိတျဝငျစားမယျ့ ကားကောငျးလေးတဈကားပါ
ဇာတျလမျးကလညျးစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးသလို လူတိုငျးစိတျထဲမှာတဈနညျးနညျးနဲ့ ခံစားနရေတတျတဲ့ အထီးကနျြမှုကိုပါသခြောသရုပျဖျောသှားနိုငျလို့ နောကျဆုံး စိတျထဲမှာတဈခုခုကနျြသှားနိုငျမယျ့ ကားကောငျးလေးတဈကားလညျးဖွဈပါတယျ
ဘဝမှာတစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေတာမျိုး၊ကိုယ့်အမှားမဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားသူအမှားကြောင့်အပစ်ပယ်ခံရတာမျိုးကို ကြုံနေရတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုစုံထောက်တစ်ယောက်က စုံစမ်းတာနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို စဖွင့်ထားပါတယ်
ဒီကားထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကတော့နာမည်ကြီးမင်းသမီး Kim Hye-soo၊ တက်သစ်စ မင်းသမီးလေး No Jeong-ee (18 Again) နဲ့မင်းသားချော Lee Sang-Yeob တို့က ပါဝင်ထားပြီး ၂၀၂၀မှာထွက်ရှိထားပြီးIMDB 10/7.3 ထိ ရထားတဲ့ Drama/Crime ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်
ဇာတ်လမ်းကို ပြန်ပြောရရင် မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် အလုပ်နားထားရတဲ့ ဂင်ယောင်းဆွန်း အမှုစစ်ကိုအထက်လူကြီးဖြစ်သူကခေါ်ပြီး အလုပ်ခွင်နားထားရတဲ့မတော်တဆပြစ်မှုနဲ့ ရာထူးတိုးချင်တယ်ဆိုရင်အမှုတစ်ခုကိုလိုက်ပြီး အမှုပိတ်ဖို့အတွက်အစီရင်ခံစာတင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်
ဂင်ယောင်းဆွန်းကိုယ်တိုင်ကလည်း ယောက်ျားနဲ့ကွာရှင်းဖို့အမှုရင်ဆိုင်နေရပြီးမတော်တဆမှုကြောင့် လက်အကြောဆိုင်းတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့အပြင်အလုပ်ကလည်းမတော်တဆမှုအတွက်နဲ့ ပြုတ်မလိုဖြစ်နေခဲ့သူပါ
အဲ့ဒီအချိန်အထက်ကစုံစမ်းခိုင်းတဲ့ ဆယ်ဂျင်းဆိုတဲ့ သူဌေးသမီးကောင်မလေးတစ်ယောက်သေကြောင်းကြံစည်မှုကို အစီရင်ခံစာဖို့လုပ်ရင်း မထင်မှတ်ထားတွေပါ ဆက်လက်သိရှိလာခဲ့ပါတယ်ကောင်မလေးအဖေဖြစ်သူကလည်း မတရားမှုများစွာလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးအစ်ကိုဖြစ်သူကလည်း ဆေးမှုနဲ့ထောင်ကျနေပါတယ်
ဆယ်ဂျင်းကိုလည်း သူ့အဖေပြစ်မှုတွေအတွက် သူမသေကြောင်းမကြံခင်မှာ ရဲတွေဖက်ကစစ်ဆေးခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ဂင်ဆွန်းယောင်းကမတော်တဆမှုကြောင့်ဆေးရုံရောက်နေချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်
ဂင်ယောင်းဆွန်း ဆေးရုံက ဆင်းလာပြီးနောက် အထက်က ယာယီအလုပ်ဆင်းခိုင်းခဲ့ချိန် ဆယ်ဂျင်းက သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးအားလုံးက အပြီးသတ်ချင်နေတဲ့အမှုက ယောင်းဆွန်းလက်ထဲကိုရောက်လာခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရဲတွေဖက်ကဒီအမှုကိုသေချာမစုံစမ်းပဲ မြန်မြန်ပိတ်ချင်နေခဲ့တာလဲ?????
ကောင်မလေးကကောဘာလို့သေကြောင်းကြံချင်ခဲ့တာလဲ ဆိုတာရယ်သူမသေကြောင်းကြံသွားခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်ကိုရီးယားကားတွေထုံးစံအတိုင်း အဆုံးသတ်မှာ အလှည့်အပြောင်းလေးတစ်ခုလည်းထည့်ထားလို့ကြည့်ရတာစိတ်ဝင်စားမယ့် ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ
ဇာတ်လမ်းကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို လူတိုင်းစိတ်ထဲမှာတစ်နည်းနည်းနဲ့ ခံစားနေရတတ်တဲ့ အထီးကျန်မှုကိုပါသေချာသရုပ်ဖော်သွားနိုင်လို့ နောက်ဆုံး စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုကျန်သွားနိုင်မယ့် ကားကောင်းလေးတစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်